Eli khaya linembali libekwe ngaphantsi kwebhloko enye ukusuka edolophini, kwaye phambi kwendlu edumileyo yaseScholte kunye neegadi! 🌷Umnini wokuqala weli khaya yayinguHenry Scholte, omnye wabaseki bePella. Iphefumlelwe ligama losapho uKaldenberg, elithetha "iNtaba ebandayo", imibala kunye nokuziva kweli khaya kubonisa "ukufudumala nokuthokomele". Kufakwe imigangatho yomthi oqinileyo, umnyango wepokotho, kunye nomsebenzi womthi wokuqala ~ uya kuziva ngathi ubuyile umva ngexesha. Yonwabela izinto ezibonwayo kunye nezandi zedolophu! Relax, phonononga, phumla.
Ikhitshi eligcweleyo elisebenzayo, igumbi lokulala eli-1 eligcweleyo kumgangatho ophezulu, igumbi lokulala eli-1 ezantsi, igumbi lokutyela kunye negumbi losapho elineWiFi kunye nomabonakude. Kukho igumbi lokuhlamba impahla elinewasha kunye nesomisi. Indlu ihlala kwikona enkulu, kwaye ineyadi encinci ukonwabela, kubandakanya neveranda engaphambili.
Esinye sezitrato ezilungileyo edolophini. Ukuhamba okuthandekayo, iigadi zokuhlola, zibe "kwi-hub" yento eyenzekayo. Ungaphantse uzive ukubetha kwento eyenzekayo entla kwedolophu ngendlela wonke umntu ahamba ngayo. Kumnandi ukuva nokubukela!
URachel angathanda ukunceda ngemibuzo malunga noPella, zive ukhululekile ukufikelela nangaliphi na ixesha!